Somali News 07.07.21 | KWIT
Laga bilaabo maanta saraakiisha caafimaadka ee Iowa waxay badalayaan inta jeer ee ay soo sheegaan xogta COVID-19. Nebraska ayaa isbadal sameysay usbuucii hore.
Saraakiisha ayaa sheegay in hadda ay u cusbooneysiin doonaa website gobolka coronavirus toddobaadkii Arbacada mar. Markii hore, waxaa la cusbooneysiiyay dhowr jeer maalin kasta.
Wiil dhalinyaro ah oo ku dhaawacmay shil ka dhacay fuulista madadaalada Iowa ee dishay walaalkiis ka yar ayaa wali ku jira kaalmada nolosha isagoo u dabaal dagaya dhalashadiisa 16aad. David Jaramillo ayaa miyir caafimaad laaluusheen Isbitaalka Carruurta Blank tan shil sabtida ee ku hirarkii kortaan River ee Adventureland Park ee Altoona.
Smithfield Foods ayaa hadda bixiya deeq shirkadda ay labada jaamacadood ee ugu weyn ee South Dakota.
Barnaamijka Deeqda Cuntada ee Smithfield ee loogu talagalay carruurta u qalma iyo kuwa ku tiirsan shaqaalaha Smithfield ayaa hadda loo heli doonaa ardaydaas aadaya midkood Jaamacadda Koonfurta Dakota ama Jaamacadda Koonfurta Dakota State.